Uqhakazile u-Shamsi osukwini olunzima lokuphosa
Tabraiz Shamsi of the Proteas
Ama-wicket amahlanu kuma-runs angu-45 ka-Tabraiz Shamsi kuhambe phambili kubadlali abaphosayo kuma-Standard Bank Proteas osukwini osukwini lokuqala lomdlalo wokuziqeqesha wezinsuku ezimbili bedlala ne-Sri Lanka Board XI e-P. Sara Oval e-Colombo ngoMgqibelo. Le-left-arm wrist spinner, kanye ne-leg-spinner u-Shaun von Berg (2/82), bahole ngebhola njengoba iqembu lasekhaya likhishwe nama-runs angu-287 kuma-overs angu-78.2.
Basebenze kanzima abaphosayo kwisimo esishisayo futhi esi-flat, kodwa abaphosayo bashintshiwe ukapteni u-Faf du Plessis , emuva kokunqoba i-toss nokukhetha ukuphosa kuqala. u-Vernon Philander no-Dale Steyn bahlanganele ibhola elisha emuva kwezinyanga eziyisithupha, futhi bobabili babuyele isimweni sabo ngokuhamba kosuku. u-Kagiso Rabada uphose nge-pace nokulwa, futhi ubukeke kahle emuva kokululama ekulimaleni ingezansi kweqolo.
u-Lungi Ngidi (1/52) iyona yodwa i-seamer ekwazile ukuthola i-wicket ikhipha ukapteni we-Sri Lanka u-Angelo Mathews, othole ama-runs amaningi u-92. Abanye abadlale indima u-Kaushal Silva (76) no-Danushka Gunathilaka (53), kubadlali abahlanu abaphezulu abanabadlali abashayayo abane be-Sri Lanka kwi-Test yokuqala.
Nokho kwisimo esikahle ahlukile kunalokhu okulindelekile e-Galle International Stadium esontweni elizayo, abaqeqeshi bazogqugquzelwa ubunzima kanye nesipiliyoni. Bonke abaphosayo bakwazile ukuphosa ama-spells amathathu, nokho abaphosa ngokushesha badlale ngamandla kushisa bhe. u-Keshav Maharaj uhlushwa ukugula futhi akwazanga ukudlala.
Bephendula, ama-Proteas asheshe alahlekelwa i-wicket ka-Aiden Markram emuva kokuthi ashaye ibhola lika-Lahiru Gamage eno-0. u-Dean Elgar (14*) no-Hashim Amla (2*) bazoqhubeka ne-innings ku-17/1 osukwini lokugcina.
u-Markram ujabulela inselelo yakwi-sub-continent u-Steyn ubuya kuma-Proteas; kufakwe ama-spinners amathathu kwi-tour yase-Sri Lanka u-Rabada ubheka unyaka ohambe kahle u-AB de Villiers uthatha umhlalaphansi emuva komsebenzi weminyaka engu-14 kuma-Proteas i-CSA ne-CA bamemezela imidlalo yama-Proteas ngebhola elimhlophe behambele e-Australia i-CSA imemezelela imidlalo yasekhaya ye-season ka-2018/19 i-CSA ne-SLC bamemezela uhlelo lama-Proteas lihambela e-Sri Lanka u-Philander uqede i-Australia ekuseni osukwini lokugcina u-Bavuma uhlelela ama-Proteas usuku olukhulu u-Markram ubekela ama-Proteas isikhonkwana ngaphambi kokuthi i-Australia iziphindiselele Ama-Proteas afuna ukumvalelisa kahle u-Morkel